Fahazoana fiambenana manokana : Mitaky dingana maro -
AccueilSongandinaFahazoana fiambenana manokana : Mitaky dingana maro
Fahazoana fiambenana manokana : Mitaky dingana maro
05/03/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy mora ny fahazoana fiarovana manokana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ary tsy ny olona na ny fikambanana rehetra manao fangatahana mahakasika izany dia mahazo avokoa. Misy lalàna mifehy azy izy ireny, izay tsy mitovy velively amin’ireo orinasa efa natokana hiandraikitra izany. Misy ihany koa ny dingana maro takiana vao tonga amin’izay fahazoan-dalana hahazo mpitandro filaminana hiaro manokana izay ny mpandraharaha iray, na teratany malagasy io na teratany vahiny.”Mpandraharaha ara-ekonomika mahazo fandrahonana amina resaka kidnapping, na fanafihana mitam-piadiana mahery vaika an-taratasy, na anaty telefaonina na mailaka, izay efa voaporofo fa misy tokoa matetika no mahazo izay fangatahana izay. Indrindra moa fa hita henjakenjana ilay fampihorohoroana dia tsy maintsy hametrahana olona” , hoy ny fanazavan’ny kaomanda Herilalatiana Andrianarisaona , tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nohamafisin’ity tompon’andraikitra ity kosa anefa, fa tsy ny tombontsoan’io olon-tokana io irery ihany no jerena ao anatin’izany fiambenana izany, fa ny filaminana sy ny fandriam-pahaleman’ny manodidina rehetra ihany koa.” Ampahafantarina amin’ilay olona nangataka mihitsy fa tsy natao hiaro eo amin’io toerana io ihany ilay zandary fa manao fisafoana ny tanàna matetika, ary miditra an-tsehatra ihany koa raha misy hiharan’ny asa ratsy eo amin’ny manodidina” , hoy ny fanampim-panazavana.
Araka ny lalàna mifehy ity vondron-kery ity , dia hiharan’ny sazy mihitsy ilay mpitandro filaminana raha mandà na mijery fotsiny ny asa ratsy mitranga eo akaikin’ilay toerana nangataka fiarovana manokana, satria dia natao ho an’ny vahoaka tsy ankanavaka ny filaminana , ary efa karazana fisafoana ihany koa izany na dia tafiditra ao anatin’ny antsoina hoe “service extraordinaire” aza. Nambaran’ity tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity ihany koa anefa fa tsy voatery mahazo fangatahana izy ireo vao mandray fepetra. “Na dia izahay ihany koa aza no maheno amin’ny alalan’ny fampilazam-baovao fa misy olona mikononkonona hanao asa ratsy amin’ny toerana iray, dia izahay mihitsy no manapa-kevitra mandefa zandary na dia tsy tian’ilay olona aza izany”, hoy ihany ny voalazany. Amin’ny maha-“service extraordinaire” io fiarovana manokana io moa, dia ireo olona nanao fangatahana no mandoa ny karama sy miantoka ny sakafo miaraka amin’ny zavatra mety ilain’ireo mpitandro filaminana mandritra izay fotoana hanaovana ny fiambenana izay. Tsara homarihina fa tsy ny zandary rehetra no afaka manao io asa fiambenana manokana io raha eto an-drenivohitra, fa ny hery vonjitaitra eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Ny FIGN sy ny CIRGN no mifandimby amin’ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ilay toerana. Arakaraka ny mbola hitohizan’ilay fandrahonana kosa no hanamafisana ny fiarovana sy ny fandraisana fepetra. “Ny tanjona, dia ny tsy hanatontosan’ilay olon-dratsy ny fikasan-dratsiny. Izay ilay asa fisorohana isan’ny imasoanay”, hoy ihany ny voalazan’ny kaomanda Herilalatiana Andrianarisaona.
Filoha Rajaonarimampianina : “Tsy ho raraka an-tany ny ran’ireo Malagasy nitolona”